काँग्रेसमा देखिएको ‘राजनीतिक संस्कार’ « Farakkon
काँग्रेसमा देखिएको ‘राजनीतिक संस्कार’
तुलसीपुर, असार ११ । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिबेशन अन्तरगत असार ९ गते दाङमा पालिकास्तरिय अधिबेशन भयो । जिल्लाका दश पालिकाहरु मध्य र चर्चा महत्वस्वभाविक रुपमा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनले पायो । यी दूबै स्थानमा पार्टी भित्रका दूई प्यानका प्रतिपर्धीले टिमनै बनाएर प्रतिपर्धा गरेका थिए ।
घोराहीमा लगभग एकै उमेर समुहका संगै राजनीति यात्रा थालनी गरेका जोशिला साथीहरु ३० बर्षीय तलिक रावत र २८ बर्षीय निरज गिरी अलग ÷ अलग टिमबाट प्रतिपस्र्धी थिए । रावत पार्टी भित्रको संस्थापन पक्ष र गिरी देउवा इतरको टिमबाट उम्मेदवार बनाइएका थिए ।
स्थानीय स्तरमा रावतलाई संविधान सभा सदस्य राजु खनाल, क्षेत्र नं. २ का सभापति भूपबहादुर डाँगी लगाएका नेताहरुका साथसमर्थन थियो । अर्कौ तर्फ गिरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नेतृ अनिता देवकोटा, पूर्व जिल्ला सभापति बीरकेश्वरी गौतम लगाएका नेताहरुको साथसमर्थन थियो । उम्मेदवार भन्दापनि गुट उपगुटमा बिभक्त नेताहरुको स्वार्थले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन ।
त्यसैले असोज ९ गते निर्वाचन भयो । रावत २८६ मत प्राप्त गरि नगरसभापति बने । प्रतिपस्पर्धी गिरीको १६२ मत आयो । यी दूईका बीचको मतान्तर १२४ को भयो ।
मतगणना अन्तिम तिर पुग्दै गर्दा गिरीको पराजय निश्चित जस्तै भइसकेको थियो । त्यही क्रममा गिरीले मतगणनास्थलमै रावतलाई अंकमाल गरे । खुल्ला मनले नगरसभापतिमा निर्वाचित रावतलाई बधाई दिए । सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गरे ।
लगतै गिरीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखे ‘ निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । सभापति पदमा मेरा परम मित्र रावत संग म चुनाबी प्रतिपस्र्धामा थिए । मैले हारे,मेरो मित्रको जित भयो । तथाबी हामी बीचको मित्रतालाई चुनाबले किमार्थ हराएको छैन । मित्रता संगै हाम्रो राजनीति सहकार्य अनन्त भइरहने छ ।’
गिरीले आँफूलाई मतदान गर्ने सबै मतदाता प्रति धन्यबाद र आभार समेत ब्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सभापतिमा करिब ४२ बर्षीय सुरेश हमाल र झन्डै ४० अनिल कार्की टिमसहित मैदानमा उतारिए । हमाललाई काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी र कार्कीलाई पूर्व माननिय गेहेन्द्र गिरीको साथ समर्थन थियो ।
यी दूई दाजु भाई बीचका गुट उपगुटको राजनीतिकै कारण दाङ काँग्रेसको राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ । त्यसैले यस पटकपनि तुलसीपुरको चुनावले सबैभन्दा बेसी महत्व र चर्चा पाउनु स्वभाबिक थियो । त्यसमा पनि सभापति पदका हमाल र उपसभापति पदका उम्मेदवार बिनिल केसी तुलसीपुर क्षेत्रबाट हरेक क्षेत्रमा उदयमान युवाहरु भएको हुँदा चर्चा चुलिनु अन्यथा थिएन । अनिल कार्कीपनि राप्ती बबई क्याम्पसका स्ववियू सभापति हुन । उनको निस्कलंक छबिको चर्चा थियो । दुबैले निकै उत्साह र तडक भड्कका साथ प्रचार प्रशार गरेका थिए ।
त्यो बीचमा सहमतिको हल्ला नचलेको होइन । तर, स्वार्थको राजनीतिक रोटी सेक्न पल्केकाहरुले त्यसो हुन दिएनन् । अनन्तः असोज ९ गते निर्वाचन भयो । हमालले प्रतिस्पर्धी कार्कीलाई १६० मत अन्तरले पराजित गरे ।
हमालले ३६८ मत प्राप्त गर्दा र कार्कीले जम्मा २०८ मत मात्रै प्राप्त गर्न सके । कार्की टिमबाट उपाध्यक्षमा गौरब सुबेदी बाहेक हमालको टिम सबैले जिते । जित पछि हमाल र उनका साथीहरु तुलसीप्ुरको बिपी चोकमा पुगेर शालिकमा मार्यापन गर्न पुगे । संस्थापक नेता बिपीको योगदान र मार्ग अनुशरण गर्ने प्रण गरे । लोकतन्त्रको नारा घन्काए । जितको थोरै हर्षौ उल्लास र अभिरमा रंगिदै खुसीयाली मनाउनु स्वभाविक थियो ।
तर, जितपछि लगतै उनीहरुले मतदाता, मतदान अधिकृत, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी सबैलाई धन्यबाद तथा आभार ब्यक्त गरे । त्यस्तै हमालको टिमले पार्टी भित्रै पक्ष बिपक्षी मानिने हरेक नेताको घरमा आर्शिबाद लिन गएर उच्च ‘राजनीतिक संस्कार’ पर्दशन ग¥यो ।
जिल्ला पार्टी सभापति कीर्तिबहादुर खड्का, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी, पूर्व माननिय गेहेन्द्र गिरी, संविधान सभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारी, क्षेत्र नं. ३ का सभापति जगतबाहदुर खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामिण तथा सहरी बिकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई गएर भेटे । सबैले नब निर्वाचित नगर सभापति लगाएत सबैलाई आर्शिबाद दिए । ढाडस र हौसला प्रदान गरे । युवाको जोश र शक्तिलाई काँग्रेस एक ढिक्का बनाउन सदुपयोग गर्न सुझाब दिए । एक किसिमले त्यो सन्देश थियो । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै यसले युवा गुट भत्काउन र काँग्रेस एक ढिक्का बनाउन चाहान्छन् भन्ने छनक दिएको छ ।
यसअघि पार्टी भित्रैका निर्वाचनमा यसरी निर्वाचन लडेर जित्नेहरुमा यस्तो मेलमिलाप युक्त उच्च राजनीतिक संस्कार देखिदैन थियो । बरु दम्भ मात्रै देखिन्थ्यो । जित्नेहरु ‘गू’ बारीका मूला जस्तै फूल्लिएर बस्ने गर्थे । फरक प्यानका नेता भेट्न र आर्शिबाद थाप्न जानु उनीहरु सोच्न पनि सक्दैन थिए । त्यस्तै नेताहरुले चर्कौ स्वरमा बोल्थे – ‘पार्टीमा गूट उपगुट ध्वस्त पार्नु पर्छ ।’ अनि कसरी गुट उपगुट सकिने ?
तर, यसपटक युवाहरु निर्वाचित फरक परिदृष्य देखियो । उदार र भातृत्वको भावना देखिएको छ । यसले आशाको सञ्चार गरेको छ । घोराहीमा पराजय बेहोरे पछि निरज गिरीले भने जस्तै खेलमा भाग लिएपछि जितहार सामान्ने नियम नै हो । त्यसले आपसी मित्रतालाई कहिलै बिग्रन दिनु हुँदैन ।
‘नेताले गर्ने बोली ब्यबहार र आचरण अर्कौले पनि अनुशर गर्ने हो,’ युवा नेता युवराज खड्काले भने ‘यो अन्रत पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै हो, यसलाई ईगोको बिषय कसैले बनाउनु हुँदैन ।’राजनीति गर्नु भनेको कठिन जीवनको लामो उडान भएको भन्दै युवा नेता खड्काले एउटा सानो धक्कामा आत्तिनु, निराश हुनु लोकतान्त्रिक आचरण बिपरितको चिन्तत मान्नु पर्ने तर्क गरे ।
‘म सके जित्छु नत्र सिक्छु भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ,’ खड्काले भने ‘ हार र जित राजनीतिक जीवनका दूई सिक्का हुन भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ।’
खड्काले निर्वाचनमा पराजित मध्य कतिपयले सहर्ष हार स्वीकार गरेको र मतदातालाई धन्यबाद गरेको भएपनि त्यसमध्यका केही प्रमुख पात्रले त्यसो नगर्दा उनीहरुको राजनीतिक संस्कार झल्किएको बताए । ‘गफ र भाषणमा कसैको आचरण झल्किदैन,’ उनले भने ‘ त्यो त उसको ब्यबहार र क्रिया कलापले झल्किने हो ।’
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिबशेन अन्तरगत भदौ २१ र २२ गते दाङमा वडा अधिबेशन र असोज ९ गते पालिकास्तरिय अधिबेशनबाट अधिकाँस युवाहरु निर्वाचित भएको हुँदा पार्टी भित्र पुराना गुटहरु भत्किने खड्काको विश्वाश छ ।
के दाङमा काँग्रेस भित्र एकजना पनि नगरको नेतृत्व हाँक्न सक्ने महिला छैनन् ?